Localisation Satellite des Eglises Jesosy Mamonjy - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Administrator · Publié 26 septembre 2019 · Mis à jour 12 juillet 2020
Eo am-panaovana Mise à jour tsikelikely izahay mba hahitana avy hatrany ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra amin’ny alalan’ny Google Maps. Efa misy vitanay aloha ireto azontsika jerena (Mankanesa etsy ampita ankavian’ny page > klikeo ny Maps).
Mba ho fanatsarantsika miaraka ity Sitentsika ity anefa dia mangataka fiaraha-miasa aminareo izahay indrindra ianareo any amin’ny faritra; koa mifandraisa aminay avy hatrany hafahana manoro lalana anao. Mankanesa eny amin’ny Menu > Hifandray aminay
Fepetra ilaina : Manana Smartphone afaka manao connexion, na manana ordinateur misy connexion, mahay manokatra Google Maps, mahay mandefa mail.
Article suivant Mijoroa vavolombelona
Article précédent Ry tanora, hotsarain’Andriamanitra izay manambady olona efa manan-tokantrano